ဝေါဟာရသစ် လေ့လာခြင်းကို နေ့စဉ်လုပ်သည့် အလေ့အကျင့်ဖြစ်လာစေရန် | British Council
အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုတတ်သူတစ်ဦးဆီမှာ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ စကားလုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတအများကြီး ကြွယ်ဝဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သဒ္ဒါဆိုတဲ့အရာကို ကွေ့ပတ်ရှောင်ချင်ရင် ရှောင်လို့ရပေမဲ့ ဘာသာစကားကို တည်ဆောက်ရင်သုံးတဲ့ ဝေါဟာရ စကားလုံးတွေကိုတော့ ရှောင်ကွင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ဆန်ဆန်ပဲ တွေးတောလုပ်ဆောင် ကြည့်ကြရအောင်။ အင်္ဂလိပ်စာ အဘိဓာန်တစ်အုပ်ကို တစ်နေ့တည်းနဲ့ အလွတ်ရအောင် ကျက်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုတာမျိုးဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲ သင်အချိန်ပေးရုံလောက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ့် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ကို ကျွန်တော်တို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဆယ်မိနစ် မှ မိနစ် နှစ်ဆယ် လောက် အာရုံစိုက်လေ့လာပါ။
နေ့စဉ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိမယ့် ရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ပြီး အဲ့ဒီအတိုင်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။ ပထမအစပိုင်းမှာ နေ့စဉ် စကားလုံးအသစ် တစ်လုံးနဲ့ စတင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်းစီ တစ်နေ့ကို စကားလုံးနှစ်လုံးမှ ငါးလုံးအထိ တိုးသွားပါ။ ဘာသာစကားလေ့လာဖို့ အချိန်အများဆုံး ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုမေးမြန်းပါ။ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၂၀ ပေးနိုင်ရင် ငါ့ရဲ့ရည်မှန်းချက် ပစ်မှတ်ကို ရောက်မလား။ အရေးကြီးတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို နေ့စဉ်မပြတ် လေ့လာမှုပြုတဲ့ အလေ့အထဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ပါဘဲ။ သတိပြုဖို့ကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် ပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်တာဟာ တစ်ပတ်လောက်မှ နာရီဝက်လောက် လုပ်ဖြစ်တာမျိုးထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရလာဒ်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးတယ်ဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေါဟာရ မှတ်ဖုိ့ မှတ်စုစာအုပ်ဆောင်ထားပါ။
မိမိလေ့လာမှတ်သားထားသမျှကို တစ်နေရာတည်းမှာထားပါ။ ဝေါဟာရ မှတ်စုစာအုပ်လို့ ဆိုလိုက်လို့ မှတ်စုစာအုပ်သက်သက်ကိုဘဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်က သင့်စမတ်ဖုန်းထဲက အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုခုကိုသုံးပြီး မှတ်ချင်သားချင်တယ်ဆိုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သင် ရှာဖွေလေ့လာ မှတ်သားထားသမျှကို မှတ်တမ်းပြုစုထားဖုိ့ စံနစ်တစ်ခုကို ဖေါ်ဆောင်ထားဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက် အနည်းဆုံး ကိုယ်မှတ်ထားတာတွေကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုပြီး ပြန်လှန်လေ့ကျင့်လို့ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးတည်း သီခြား မမှတ်ပါနှင့်။
ဝေါဟာရကို လေ့လာတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်တော်တဲ့အခြေအနေတွေမှာ သင်လေ့လာထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ စကားလုံးတွေကို လေ့လာပျိုးထောင်တဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ အတူတွဲဖက်သုံးရတဲ့ preposition ဝိဘတ်စကားလုံးတွေကိုပါ တွဲမှတ်ပါ။
ဥပမာ- “get away with” နဲ့ “get away from” တို့ဟာ ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ ပထမဟာကတော့ အပြစ်တစ်ခုခုကို ကျုးလွန်ခဲ့ပြီး အပြစ်တင်ခံရခြင်း၊ ပြစ်ဒါဏ်ကျခံရခြင်း မရှိဘဲလွတ်မြောက်သည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး (He thinks he can get away with cheating.) ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ရှောင်သွားသည်၊ လွတ်မြောက်အောင်လုပ်သည် လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ (I want to get away from our house.)
သုံးရင် သုံး၊ မသုံးရင် ရှုံး ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်အဆိုရှိပါတယ်။ ရေးချလိုက်ရုံနဲ့ကို လုံလောက်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေနဲ့ ယဉ်ပါးဖို့ဆိုရင် များများချရေး လေ့ကျင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လေ့လာထားပြီးသား စကားလုံးအသစ်တွေကို ကောင်းကောင်းပြန်အသုံးချပါ။
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတစ်ခုခုမှာ တက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်း မိမိရေးထားတဲ့အကြောင်းတွေ မှန်မမှန် ဆရာ့ဆီမှာ ပြပြီး စစ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို ပိုပြီးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ ထပ်မံလေ့လာလုပ်ဆောင်နိုင်စရာတွေကို သူတို့ဆီကနေ အကြံဥာဏ် ထပ်တောင်းယူလို့လည်း ရပါတယ်။